यी हुन् टेष्ट क्रिकेटमा आउट हुने विश्वकै पहिलो खेलाडी
काठमाडौं- टेष्ट क्रिक्रेटको पहिलो खेल सन् १८७७ मा भएको थियो । अर्थात् आजभन्दा झन्डै १ सय ४४ वर्ष पहिले । यो खेलमा अष्ट्रेलिया र इंग्ल्याण्डले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।
पहिलो खेलमा के भयो? कसले जित्यो? कसले प्रदर्शन गर्‍यो? यी सबै कुराहरू इतिहासको पानामा लेखिएका छन् । किनभने यो खेलमार्फत सबैभन्दा ठूलो प्रतिष्ठित ढाँचा सुरू भयो ।
सो खेलमा सहभागी एक खेलाडीलाई अहिले पनि सबैले सम्झिने गरेका छन् । ती खेलाडी हुन्, नेट थामसन। थामसन क्रिकेटको इतिहासमा आउट भएका पहिलो ब्याट्सम्यान हुन् ।
तर, उनलाई यो खराब रेकर्डको तीन हप्तापछि के भयो त्यो अझ आश्चर्यजनक छ । थामसनको जन्म सन् १८३९ मा भएको थियो । इंग्ल्याण्डविरुद्धको विश्वकपको पहिलो टेस्ट खेलमा उनी अष्ट्रेलियाको टीमबाट सहभागी भएका थिए ।
थामसन यस खेलमा चार्ल्स ब्यानरम्यानसँग ब्याटिङमा आए । तर, उनी इङ्ग्ल्यान्डका तीव्र गतिका बलर एलन हिलको बलमा मात्र एक रन बनाएर आउट भए । यो टेस्ट क्रिकेट इतिहासको पहिलो विकेट थियो । थामसनको करियर केवल तीन हप्तापछि समाप्त भयो, जसको बारेमा उनले सोचेका पनि थिएनन् ।
थमसन दोस्रो टेस्टपछि टिमबाट बाहिरिएका थिए । त्यो पनि जब उनले दोस्रो टेस्टको दोस्रो इनिङ्समा ४१ रन बनाए भने कुनै पनि अष्ट्रेलियाका ब्याट्सम्यान ५० रनको आँकडा पार गर्न सकेनन् । थामसनले दुई टेस्ट करियरमा १६ दशमलव ७५ को औसतमा ६७ रन बनाए ।
त्यसपछि उनले कहिल्यै अष्ट्रेलियाका लागि खेल्न सकेनन् । उनको २ सेप्टेम्बर १८९६ मा ५७ वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो । क्रिकेट इतिहासको पहिलो टेस्टमा अष्ट्रेलियाले पहिले ब्याटिङ गर्दै २४५ रन बनायो । यसमा चार्लस ब्यानरम्यानले सबैभन्दा धेरै १६५ रन बनाए । यो क्रिकेट इतिहासको पहिलो शतक पनि हो ।
उनीबाहेक कुनै पनि खेलाडीले २० रनको आँकडा पार गर्न सकेनन् । इङ्ग्ल्यान्डका लागि अल्फ्रेड श र जेम्स साउथर्टनले ३–३ विकेट लिए । जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको इङ्ग्ल्यान्ड १९६ रनमा समेटियो । ओपनर ह्यारी जुप्पले सर्वाधिक ६३ रन बनाए भने ह्यारी चार्लवुडले ३६ र एलन हिलले ३५ रनको योगदान दिए । बिली मिडविन्टरले ५ विकेट लिए ।
अष्ट्रेलियाले दोस्रो इनिङ्समा ६८ ओभरमा १०४ रनमा समेटियो । टोम होरानले सर्वाधिक २० रन बनाए भने इङ्ग्ल्यान्डका लागि अल्फ्रेड शाले ५ विकेट लिए । जर्ज उलिटको खातामा ३ विकेट रेकर्ड गरियो। अस्ट्रेलियाले इङ्ग्ल्यान्डलाई १५४ रनको लक्ष्य दिएको थियो ।
इङ्ग्ल्यान्डका लागि यो खेल महाभारत सावित भयो । इङ्ग्ल्यान्डले पूरै विकेट गुमाएर १०८ रन मात्रै बनाउन सक्यो । जोन सेल्बीले ४५ रन बनाए । तर, अन्य कुनै पनि ब्याट्सम्यानले दोहोरो अंकमा रन जोड्न सकेनन् । अष्ट्रेलियाका लागि टम केन्डलले ७ विकेट लिए ।